" မနေ့ကကျရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာ မြန်မာဆန်ဆန်ကျက်သရေရှိစွာ ဘုရားသွားကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို တင်လာခဲ့တဲ့ စံထိပ်ထားဦး'' - Cele Gabar
” မနေ့ကကျရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာ မြန်မာဆန်ဆန်ကျက်သရေရှိစွာ ဘုရားသွားကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို တင်လာခဲ့တဲ့ စံထိပ်ထားဦး”
Koe | November 27, 2021 | Cele Lifestyle | No Comments
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ စံထိပ်ထားဦးကတော့ အရွယ်ရောက်လာလေ လှသထက်လှလာတဲ့အနုပညာမျိုးဆက်သစ်လေးပါ။မင်းသမီးခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးဖြစ်ပြီး ပညာရေးကိုဦးစားပေး သင်ယူနေပေမယ့် ရရင်ရသလို အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်လျက်လည်း ရှိပါတယ်နော်။
စံထိပ်ထားဦးလေးကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေက ချစ်စနိုးနဲ့လည်း ထိပ်ထိပ်လေးလို့ ခေါ်လေ့ရှိကြပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ပရိသတ်တွေက ထိပ်ထိပ်လေးရဲ့ TikTokတွေကို အထူးအားပေးသဘောကျလျက်ရှိတာပါပဲနော်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဂီတာတီးသင်ပြီး ပရိသတ်တွေကိုအချိန်ရရင်ရသလို ဆိုပြလေ့ရှိပါသေးတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ မနေ့ကကျရောက်တဲ့နိုဝင်ဘာလ၂၆ရက်နေ့မှာကျရောက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ ဘုရားသွားကာကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ပူံရိပ်လေးတွေကို ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တင်ပေးလာခဲ့တာပါ။” မွေးနေ့အမှတ်တရ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ မြန်မာဆန်ဆန်အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ ကျက်သရေရှိစွာလှပနေတဲ့ထိပ်ထိပ်ရဲ့ပံု​ေလး​ေတွကိုCeleGabarပရိသတ်တွေကြည့်ရှူနိုင်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source- San HtateHtar Oo
” မေန႔ကက်ေရာက္တဲ့ေမြးေန႔မွာ ျမန္မာဆန္ဆန္က်က္သေရရွိစြာ ဘုရားသြားကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ပုံရိပ္ေတြကို တင္လာခဲ့တဲ့ စံထိပ္ထားဦး”
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ စံထိပ္ထားဦးကေတာ့ အ႐ြယ္ေရာက္လာေလ လွသထက္လွလာတဲ့အႏုပညာမ်ိဳးဆက္သစ္ေလးပါ။မင္းသမီးခိုင္သင္းၾကည္ရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာသမီးေလးျဖစ္ၿပီး ပညာေရးကိုဦးစားေပး သင္ယူေနေပမယ့္ ရရင္ရသလို အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုလုပ္ကိုင္လ်က္လည္း ရွိပါတယ္ေနာ္။
စံထိပ္ထားဦးေလးကို ခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္စႏိုးနဲ႔လည္း ထိပ္ထိပ္ေလးလို႔ ေခၚေလ့ရွိၾကပါေသးတယ္။ဒါ့အျပင္ပရိသတ္ေတြက ထိပ္ထိပ္ေလးရဲ႕ TikTokေတြကို အထူးအားေပးသေဘာက်လ်က္ရွိတာပါပဲေနာ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဂီတာတီးသင္ၿပီး ပရိသတ္ေတြကိုအခ်ိန္ရရင္ရသလို ဆိုျပေလ့ရွိပါေသးတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ မေန႔ကက်ေရာက္တဲ့ႏိုဝင္ဘာလ၂၆ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္ခဲ့တဲ့ သူမရဲ႕ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ဘုရားသြားကာကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ ပူံရိပ္ေလးေတြကို ခ်စ္တဲ့သူေတြအတြက္တင္ေပးလာခဲ့တာပါ။” ေမြးေန႔အမွတ္တရ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔အတူ ျမန္မာဆန္ဆန္အျဖဴေရာင္ဝတ္စုံေလးနဲ႔ က်က္သေရရွိစြာလွပေနတဲ့ထိပ္ထိပ္ရဲ႕ပံု​ေလး​ေတြကိုCeleGabarပရိသတ္ေတြၾကည့္ရႉႏိုင္ဖို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
” ပညာ​ေရးမှာတော်လွန်းတဲ့သမီးလေးကြောင့် ဆရာမတွေက​ေတာင်တကူးတကခေါ်ကာ ချီးကျူးစကားပြောတာခံခဲ့ရတာကြောင့် ကျေနပ်ဂုဏ်ယူမိတယ်ဆိုတဲ့မျိုးစန္ဒီကျော်”
” အသက်၃၆နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ မှာ အရင်လိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပွဲတွေမလုပ်တော့ဘဲ မိသားစုနဲ့အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ AhBoy”
“ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းတဲ့သိမ်တော်မှာအပူဇော်ခံမယ့်မဟာမြတ်မုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်နဲ့သီဟာဿနပလ္လင်မန္တလေးမှ သိမ်တော်သို့ပင့်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နေဆန်းတို့ဇနီးမောင်နှံ”
No Comments | Dec 8, 2021
” ယဥ်ယဥ်လေးနဲ့မဟာဆန်ကာ မြန်မာဆန်ဆန်ရင်ဖုန်းလေးနဲ့ရှုတိုင်းလှနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုတင်လာတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်”
CeleGabar Youtube Channel
Cele Gabar was established in November 2018 and we are dedicated to be one of the most dynamic players among Myanmar media fulfilling our role as the name’s meaning which is “The world of celebrities’’.
We are not only contributing celebrities’ information, but also delivering the right information which are beneficial for the society.
© 2022 Cele Gabar.
Copyright 2021-2022,Cele Gabar-All Rights Reserved